बाल अधिकार र सरोकार पक्ष - Prateek Daily
बाल अधिकार र सरोकार पक्ष
नेपालमा बाल अधिकार दिवस सरोकारवाला पक्ष अर्थात् विद्यालयहरूले निकै धुमधामले मनाए । बाल अधिकारको सबैभन्दा बढी चासो विद्यालयले देखाउनु स्वाभाविक हो, तर यतिमैं सीमित पार्न खोज्नु चाहिं बेइमानी हो । बाल अधिकारको अर्थ बालबालिकालाई उनीहरूको अधिकार दिलाउनु मात्र होइन, बाल अधिकारप्रति उनीहरूलाई सजग गराउनु र घर परिवार तथा समाजमा बालबालिकाले यथेष्ट मान–सम्मान र सुरक्षाको अनुभूति गरून् भन्ने हो । यद्यपि बाल अधिकारका लागि आज विश्वभरि नै सजगता आएको छ । विभिन्न देशहरूले कानुन बनाएर बालबालिकालाई प्रताडित गर्न नहुने, गरेमा दण्डनीय ठहर्ने प्रावधान ल्याएका छन् । विवेकशील र बाल मनोविज्ञान मनन गरेका मुलुकका बासिन्दाले त बाल अधिकारको महत्त्व बुझेका छन्, तर जहाँ बालबालिकाको पनि अधिकार हुन्छ, तिनलाई त डर देखाएर, कुटेर तह लगाउनुपर्छ भन्ने ‘परिपक्व मनोविज्ञान’ उपस्थित छ, त्यहाँ विद्यालयले मात्र, त्यो पनि एक दिन, बाल अधिकार दिवस मनाउनु उपलब्धिमूलक हुन सक्दैन । यो सही कुरा हो कि सबैले सबै बालबालिकाको सबै समस्या बुझ्न सक्दैनन् । सम्झाए–बुझाए पनि कति बालबालिका आफ्नो हठ छाड्दैनन्, बुझ्न पनि सक्दैनन् । तिनलाई झन् बढी स्नेह आवश्यक हुन्छ ।
विद्यालयहरूले मनाउने बाल अधिकार दिवस औपचारिकता मात्र हो । यसको सही कार्यान्वयन घर–परिवार र समाजमा मात्र सम्भव छ । घरमा बालबालिका भनेर हेप्ने, उनका कुरा र समस्याको वास्ता नगर्ने, हप्काइ–पिटाइ गरेर अनुशासित बनाउन खोज्ने कार्य वर्जित हुनुपर्छ, तर घर–घर पसेर कसले निरीक्षण गर्ने ? प्राय: बालबालिकाहरू अभिभावकविरुद्ध बोल्न सक्दैनन्, बोले पनि कसका अगाडि गुहार लगाउने ? हाम्रो प्रशासन बोल्नेहरूको त कुरा सुन्दैन, पीडितप्रति सदाशयी बन्दैन भने यी अबोध बालबालिकाले कसरी अधिकार पाउने ? सबभन्दा पहिले घरमैं परिवारले बालबालिकाहरूलाई अभय बनाउनुपर्छ, आफूविरुद्ध भएको दुव्र्यवहारको प्रतिकार गर्न र शिकायत गर्न सिकाउनुपर्छ । बाल अधिकार सम्बन्धी कानुनी प्रावधान कठोरताका साथ लागू गर्न प्रशासन जागरुक हुनुपर्छ । विद्यालयले बाल अधिकार दिवसमा कार्यक्रमहरू गर्नुको साथै हरदिन, हरपल उनीहरूको अधिकारप्रति सजग र सतर्क रहनुपर्छ र घर–परिवारलाई पनि बेलाबेलामा अनुशिक्षण दिनुपर्छ । विद्यालयमा मनाइने प्रत्येक अवसरमा बाल अधिकारको एउटा विषयमा छलफल राखेर ‘दिवस’मा मात्र होइन, बालअधिकार सधैंको सरोकारको विषय हो भन्ने अनुभूत गराउनुपर्छ ।
हाम्रो समाजको सोच नै अपा· छ । जसरी चिकित्सकले अपा·को उपचार गर्दा नियमित व्यायाम गर्ने अभ्यास गराउँछ, त्यसैगरी कुनै न कुनै निहुमा विद्यालयहरूले बाल अधिकारको विषयलाई सधैं अभ्यास गराउने हो भने बाल अधिकारको क्षेत्रमा त्वरित गतिले सफलता पाउन सकिन्छ । किनकि निर्भय बालबालिका नै भोलिका निर्भय नागरिक बन्छन्स निर्भय प्रशासक र निर्भय शासक बन्छन् । बालबालिकामा डर बस्यो भने उसमा कुण्ठा उत्पन्न हुन्छ, जसले जीवनपर्यन्त पिछा छाड्दैन । त्यसैले हिजोआज भयरहित शिक्षणमाथि जोड दिने गरिएको छ । ‘हामीलाई गुरुजीले डण्डाले पिटेर पढाएका थिए, हाम्रा बालबालिकासँग पनि त्यस्तै व्यवहार हुनुपर्छ’ भन्ने सोच गलत हो । हिजो हामीले नजानेर जे गर्‍यौं आज जान्ने भएर पनि त्यही गर्नु विवेकसम्मत हुन सक्दैन ।